Wararka - Sida loo Gooyo & loo adkeeyo Decking isku darka
Sida sawirka sare ka muuqata, laga yaabee in deegaankaagu la mid yahay sidan oo kale, waa wax aan caadi ahayn oo waxaad dooneysaa inaad ugu qaabeyso qaab muuqaal ah laakiin WPC decking warshaddu marwalba waxay kuu sheegaysaa inay soo saari doonaan hal ama labo shey oo cabir iyo dherer ah. Kuwaan, waxaad u maleyn kartaa in nashqaddaada aan la xaqiijin karin. Ha walwelin, iskudhafka WPC oo isku dhafan ayaa loo goyn karaa si loogu habeeyo qalabyada qeexitaano kala duwan, isku dhafan sidoo kale waa la xiiqi karaa, la qali karaa, la qali karaa. kaligaa samee.
Waxaad ku samayn kartaa goyn fudud iskutallaabta gudaha decking isku dhafansi la mid ah sidaad u gooyn lahayd geed kastoo jilicsan — miinshaar wareeg ah oo xoog leh ayaa shaqeyn doonta. Miishaarka miisaanka korontada ayaa bixin kara mid aad u sax ah, goyn toosan, iyo miis miis leh kordhinta taageerada ayaa ka dhigi kara dhammaan noocyada goynta fudud. Caleemaha cirbadaha la jeexjeexay ayaa la soo jeedinayaa — ilkaha yar ayaa u roon goynta jilicsan. Ha u oggolaan in garduhu ay aad u kululaadaan markay wax jarayaan maxaa yeelay taasi waxay sababi kartaa in gogo'yadu noqdaan kuwo la rogrogo ama la ruxruxo.
Haddii lagu rakibayo decking ku wareegsan qaab-dhismeedka jira, router fudud ayaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo jeexitaannada qalooca. Goynta nadiifka ahi waa inaysan ka tagin wax wasakh ah, laakiin haddii aad u baahan tahay inaad nadiifiso gees, ku tali inaadan isticmaalin sanderka. Sanders wuu kharribi doonaa dhammeystirka kiisaska badanaana wuu burin doonaa dammaanaddaada. Mashiinka gacanta la qabsanaya ayaa si fiican u shaqeyn doona si uu u simo geesaha dhammaaday haddii loo baahdo.Waxaad jari kartaa qurxinta banaanka sida maskaxdaada, kaliya waxaad u baahan tahay inaad taxaddar sameyso!
Kala dheereynta dheeriga ah sidoo kale waa muhiim inta udhaxeysa looxyada iyo halka looxyadu ku kulmaan derbi marka deckingku u socdo dhinaca derbiga. Inta udhaxeysa looxyada dhammaadka-dhamaadka, u oggolow meel bannaan oo 3/16-inji ah. Meesha ay guddigu ku dhammaadaan la kulmo darbi, ka tag farqiga 1/2-inji oo caafimaad leh si loo hubiyo in maaddadu ay sii ballaarin karto oo ay isdul taagi karto iyadoon lala xiriirin derbiga. Tani waxay kordhin doontaa cimriga dusha sare waxayna sidoo kale ka hortagi doontaa sujuudi inta lagu jiro maalinta ugu kulul.
Looxyada dejinta WPC waxaa lagu dhejin karaa alwaaxyo daaweyn lagu daaweeyay oo leh boolal ama dhejiyeyaal qarsoon. Isticmaalka boolal isku dhafan oo isku dhafan ayaa muhiim ah maxaa yeelay waxaa si gaar ah loogu talagalay inay ka caawiyaan in maaddada meesha lagu hayo.
In kasta oo guddiga sare ee isku dhafan uu ka xasilloon yahay geedka caadiga ah, haddana wuu jabi karaa marka la wado qalabka wax lagu xiro ee ku dhow geesaha. Horay udaloolida godadka tijaabada ah waxay kahortagi kartaa tan inay dhacdo oo sameynta rakibisteeda dhaqso badan ayeyna u jilicsantahay. Halkii ay ka ahaan lahaayeen godadka tijaabada, soo saarayaasha qaar waxay soo jeedinayaan in la qodo dalool bilow ah oo qiyaastii 1/8 inji qoto dheer u ah maaddada. Xulo waxoogaa cabbir ah oo le'eg isla barta dhexe ee meeriska oo taxaddar inaadan aad ugu sii dhaadhicin maaddada.
Xiriirayaasha daboolka laakiin kama qoto dheer yihiin madaxa fur. Abuuritaanka dhammeystir adag, ka-fiirsashada qotada dheer waxay yareyn kartaa waxtarka dhejiska waxayna baabi'in kartaa dammaanadda. Sidoo kale waa muhiim in dhammaan boolal lagu hubiyo xagal 90-digrii ah looxyada. Ku dhejinta dhinaca waxay sababi kartaa hoos u dhac ku yimaada dusha sare ee iskudhafka ah waxayna baabi'in kartaa dhamaadka.
Waqtiga boostada: Jul-13-2021
alwaax decking isku dhafan, Gogosha WPC, Dabaqa WPC, Qurxinta banaanka ee WPC, Qurxinta WPC, Bannaanka WPC decking,